International News Archives - Nalonetardiary
ရန်ကုန်မှဘန်ကောက်သို့ မော်တော် ယာဉ်ဖြင့် ၉ နာရီကြာသွားရောက်နိုင်မည့် စီမံကိန်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ချေးငွေအကူအညီဖြင့် စတင်နေ ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဦးကျော်လင်းက ပြောသည်။ ပဲခူး-ကျိုက်ထို အမြန်လမ်းမကြီး စီမံကိန်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ထံမှ ချေးယူသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈၃ ဒသမ ၈ သန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသည့်အကြောင်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းကတစ် ဆင့် ရန်ကုန်မှ ဘန်ကောက်ကို အချိန် ၉ နာရီတည်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ရန် အထောက် အပံ့ပြုမည်ဟု ၎င်းင်းကဆိုသည်။ ” လက်ရှိ ရန်ကုန်သီလဝါကနေ ဘန်ကောက်ထိ မော်တော်ယာဉ်နဲ့သွား မယ်ဆိုလျှင် ၁၆ နာရီခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ခရီးမိုင်အနေနဲ့ အရှည် ၅၇၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက … Read more
Categories International News, Local News Tags ရန်ကုန်မှဘန်ကောက်
August 2, 2020 by Nalonetar Diary
ထိုင္္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သား ဇနီးေမာင္ႏွံ 1-8-2020 ရက္​ေန႔ထြက္္ ထိုိင္းထီအျမင့္ဆံုးဆု ပထမဆု ထိုိင္းဘတ္ေငြ (6)သန္း ကံထူး႐ွင္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ လာမယ့္အပတ္မွာလည္း ျမန္မာလုပ္သား ကံထူးရွင္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ…. ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ….. ရဲမင္း (AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႔) Unicode ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံ 1-8-2020 ရက်နေ့ထွက် ထိုင်းထီအမြင့်ဆုံးဆု ပထမဆု ထိုင်းဘတ်ငွေ (6)သန်း ကံထူးရှင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ၊ လာမယ့်အပတ်မှာလည်း မြန်မာလုပ်သား ကံထူးရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ…. ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ….. ရဲမင်း (AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့)
Categories International News, Local News Tags ထိုင်းထီ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အရေးတကြီး သွားရောက်ရန် လိုအပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်များ တွင် လိုက်ပါနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့်အစီအစဉ် ၁။ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ် ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကြောင့်လည်းကောင်း ပြည်ပတွင် အခက်အခဲ များ ကြုံတွေ့နေကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ် များဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်လေယာဉ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည့်ကာလအတွင်း ပြည်ပ သို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် အရေးပေါ်ထွက်ခွာလိုသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားများသည်လည်း အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေကြရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၂။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာခရီးသည်လေယာဉ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်း ထားစဉ်ကာလအတွင်း … Read more
Categories International News, Local News Tags ပြည်ပနိုင်ငံ
အသွင်ပြောင်း ပါကင် တွေ မြန်မာနိုင်ငံ သွင်းနေပြီထင်တယ် ဘယ်သူ့စီးပွားရေးကိုမှထိခိုက်ရန် မရည်ရွယ်ပါ ထိုင်းနိုင်ငံမှနာနတ်သီးများသည် ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်တွေ့ရသည် Dragon King နာနတ်သီးများသည် ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေသည့် တရားမ၀င်ချိုသည့် cyclamic acid နှင့်အဆိပ်သင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် Keoni Everington၊ ထိုင်ဝမ်သတင်း၊ ၀န်ထမ်းစာရေးဆရာ TAIPEI (ထိုင်ဝမ်သတင်း) ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ သဘာဝမွှေးသောအရသာနှင့်ထူးဆန်းသည့် အရသာရှိသည့်ထိုင်းမှ တင်သွင်းသောနာနတ်သီးထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ စားသုံးသူတစ် ဦး ထံမှတိုင်ကြားချက်တစ်ခုရရှိပြီး နောက်ထိုင်ပေကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးဌာနမှ ထုတ်ကုန်အားပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဦးစီးဌာနသည် Dragon King Pineapples (泰國鮮凍龍王 samples) နမူနာများကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁.၁ ဂဂရမ်အက်ဆစ် (cyclamate) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ၎င်းမှာသစ်သီးခြောက်၊ ဖရဲသီးအစေ့နှင့် ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များတွင် ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။ အေးစက်နေတဲ့အသီးကိုသီးထည့်သွင်းခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏လက်လီရောင်းချသော … Read more
Categories Food, International News Tags နာနတ်သီး
ထိိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိိုင်း၊ ပရာကျင်းပူရီခရိုင်ထဲမှာ ဒုလ္လဘရဟန်းခံခဲ့သူတစ်ဦးက သူ့ကို မနက်တိုင်းဆွမ်းလောင်းခဲ့တဲ့ အဘွားအိုအတွက် တိုက်အိမ်တစ်လုံး ဆောက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ နိိုင်းနတ်ထဝုတ် ငူးဆွန် ဆိုသူဟာ ဘန်ကောက်က ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက ပရာကျင်းပူရီခရိုင် ကပင်ပူရီမြို့ရှိ ဆာမတ်ခီး ဆမိုးဆွန်ကျောင်းတိုက်မှာ ဒုလ္လဘရဟန်းခံခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းဘဝမှာ ဆွမ်းခံထွက်စဉ် ယိိုင်နဲ့နဲ့အိမ်စုတ်တစ်လုံးရှေ့ကနေ မနက်တိိုင်း ဆွမ်း လာလောင်းတဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို သူက သတိထားမိနေပါတယ်။ အဆိုပါ အဘွားအိုဟာ အသက် ရ၀ ရွယ်ရှိ နန်းဆိုဝဖား ဖွန်းလ်ဆင်် ဆိိုသူဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကာ သားသမီး ၄ ယောက်ရှိပေမယ့် အားလုံးက အဝေးမှာ အိိမ်ထောင်အသီးသီး ကျသွားလို့ တဲအိမ်လေးမှာ တစ်ဦးတည်းနေနေ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဘွားအိုနေထိုင်တဲ့ တဲစုတ်မှာ အလွန်ယိုင်နဲ့နေပြီး … Read more
Categories International News Tags ထိိုင်းနိုင်ငံ
ျမန္မာေငြနဲ႕ တစ္္လံုးကို တစ္သိန္းေက်ာ္တဲ့ ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆုံး သရက္သီး
May 17, 2020 by Nalonetar Diary
ဒီတသက္စားရဖို့ေနာ့မျမင္ တလုံးကိုု တစ္သိန္းေက်ာ္တဲ့ ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆုံးMiyazakiသရက္သီး အသီးမွာသရက္ဆိုိသည့္အတိုင္း သစ္သီးမ်ားတြင္သရက္သီးသည္ အရသာႏွွင့္အေရာင္အနံ့ကစြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ ကမၻာ့သရက္သီးေဇ်းကြက္တြြင္ ေဇ်းအႀကီးဆုံးသရက္သီးမ်ိဳးမွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံထြက္မီယာဇာကီသရက္သီးျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အေလးခ်ိန္ရွိ အသီးတလူံးလ်င္($50-$70(ျမန္မာေငြတသိန္းေက်ာ္) တန္ဖိုးရွိပါသည္။ အသီးအေလးခ်ိန္သည္ 350gmအထက္ရွိိရပါမည္။ Miyazakiသရက္သီးသည္ သာမန္သရက္သီးထက္၁၅%မၽွပိုခ်ိဳပါသည္။ Miyazaki သရက္ကို ဂ်ပန္နိုင္ငံေတာင္ပိုင္း က်ဴ႐ူးကၽြန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆုံး သရက္သီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ၏အေရာင္ႏွင့္ အခ်ိဳဓာတ္ျမင့္မားမွုေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးသရက္အျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေသာေနရာသည္ေန႔အလင္းေရာင္ရရွိမွုျမင့္မားၿပီး မိုးေရခ်ိန္မ်ား ေသာေၾကာင့္္သရက္သီးက အေရာင္လွေစတယ္လို့ ယူဆၾကပါတယ္။ အသီး ရင့္မွည့္ပါက သူ႔အလိုလိုေႂကြေသာအသီးက အခ်ိဳဓာတ္ျမင့္မားတာကိုိ သတိျပဳမိတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးသူေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသီးကိုဇကာပိုိက္အိပ္ စြပ္ေပးၿပီး အလိုအေလ်ာက္ေႂကြက်မွ အသီးကိုယူၾကပါတယ္။ ရင့္မွည့္ပါကအနီရင့္ေရာင္ရွိသည္။ ထို့့ေၾကာင့္ Miyazaki သရက္ကို “Egg of Sun” ဟုတင္စားျခင္း ျဖစ္မည္။ အသီးကို အေရာင္ညီမၽွေစရန္ အသီး၏ေအာက္ေျခတြင္အေရာင္ျပန္ေစေသာခြက္ကေလးေတြ … Read more
Categories Food, International News Tags Mango